Sary Iray, Teny Arivo Mahalaza An’i Afrika Atsimo Post-Apartheid · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2016 14:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, 日本語, English
Sasantsasany amin'ny sioka miresaka ny saripikan'i Alon Skuy avy amin'ireo mpisera @LanC_02, @gussilber, @BIZKID_WORLD ary @LeMondZuid
Nisy sary nopihana tamin'ny 26 Janoary 2016, teo ivelan'ny Fitsarana Ambony tao Johannesburg, Afrika Atsimo, nisintona ny fifantohana amin'ny hatsan'ny fidirambola ao Afrika Atsimo taorian'ny apartheid.
Ny pika nalain'i Alon Skuy, Afrikana Tatsimo mpaka sary iray miasa ho an'ny gazety Afrikana Tatsimo, The Times, dia mampiseho fifangarihana eo amin'ny olo-malazan'ny radio Afrikana Tatsimo Gareth Cliff miaraka amin'ny mpisolovavany, Dali Mpofu, nandeha teo akaikin'ny lehilahy iray toa mihady ao amin'ny fako.
Nampirongatra sahotaka tao amin'ny Twitter i Gareth Cliff vao tsy ela akory izay rehefa nanome ny heviny tao amin'ny Twitter momba ny fanehoan-kevitra iray manavakava-bolonkoditra nataon'ny mpivarotra tany sy/na trano antsoina hoe Penny Sparrow milaza ny Afrikana-Tatsimo mainty hoditra mpandeha eny amin'ny tora-pasika ho ‘ragidro’ izy. Hoy i Cliff tamin'ny famaliana ny hevitra manafintohina nataon'i Sparrow, “tsy azon'ny olona akory ny atao hoe fahalalaham-pitenenana”.
Taorian'ny sahotaka, dia nesorina avy amin'ireo vondron'olona mpitsara tamin'ny fifaninanan-kira amin'ny fahitalavitra South African Idols i Cliff. Nandresy izy raha nitondra ny raharahan'ny fanesorana azy teny amin'ny fitsarana ka nilaza ny mpitsara tao fa ny raharaha dia miompana amin'ny fifanarahana fa tsy amin'ny fanavakavaham-bolonkoditra na fahalalaham-pitenenana.
Cliff, izay Afrikana Tatsimo fotsy hoditra, dia nosoloan'i Dali Mpofu, Afrikana Tatsimo mainty hoditra vava tao amin'ny Fitsarana. Mpofu no filohan'ny the Economic Freedom Fighters, [Mpiadin'ny Fahalalahana ara-Toekarena] antoko sosialista mpanohana ny mainty ao Afrika Atsimo.
Ny sary voalaza, izay nozaraina fatratra tao amin'ny media sosialy, dia heverin'ny mpaneho hevitra ho hita maso maneho indrindra an'i Afrika Atsimo post-apartheid [taorian'ny vanimpotoanan'ny fanavakavaha-bolonkoditra] , izay nihalalina ny hantsan'ny fidirambola eo amin'ny vondronolona samihafa hatramin'ny nifaranan'ny fitondran'ny fotsy hoditra vitsy an'isa tamin'ny 1994. Iray amin'ireo ahitana fitsinjarambola mifanalavitra indrindra amin'ny olona ao aminy eto ambonin'ny tany i Afrika Atsimo.
Mbola ao ambadika hatrany ny [hantsan'ny fidirambola] fa tsy mety ifantohana mihitsy. Antsika no manova izany
Afrika Atsimo… 🇿🇦
Mbola laaaavitra be ny lalana alehantsika.
Izato sarin'i Alon Skuy: Fehin'i Afrika Atsimo taorian'ny fanavakavaham-bolonkoditra.
Tao amin'ny Twitter, mpiserasera iray nanontany, nanonona ny antokon'ilay mpisolovavan'i Cliff, ny Economic Freedom Fighters [Mpiadin'ny Fahalalahana ara-Toekarena] :
Izany eo ihany fa fahalalahana ara-toekarenan'iza tokoa moa izy ity? Sary matanjaka nopihan'i Alon Skuy
Nanamarika i Shabtai Gold fa tsy namboamboarina ny sary:
Sary tena mamirapiratra tokoa avy ao Afrika Atsimo. Tsy namboamboarina. Avy amin'i Alon Skuy
Raha nankalaza ilay pika kosa i @fullframeSA :
Ny sarin'i Alon Skuy ho an'ny @SowetanLIVE ahitana an'i Gareth Cliff sy Dali Mpofu no atao hoe fanaovan-gazety an-tsary amin'ny lafiny tsara indrindra
Nahatonga ny sasantsasany hikaroka sary maro kokoa avy amin'i Skuy io sary io:
Mijery ny asan'i Skuy ao amin'ny google amin'izao fotoana izao.